Dacwooyinkii rabshadihii xaafadaha Stockholm oo hoos loo dhigay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dacwooyinkii rabshadihii xaafadaha Stockholm oo hoos loo dhigay
La daabacay måndag 29 juli 2013 kl 09.21
Dacwooyin gaaraaya 400 oo dacwo ayaa laga soo gudbiyey rabshadihii la bilowday xaafadda Husby dabadeedna ku sii fiday xaafado kale oo ku wareegsan Stockholm. Hadda xeerilaaliyayaasha ayaa boqolkiiba 90 dacwadahaas hoos u dhigay oo micneheedu tahay in aan la sii wadi doonin.
Daniel Ångman oo baare ka ahaa dacwadihii ku saabsan xaafadda Husby badankood wuxuu sheegay in ay aad u adkayd in la caddeeyo dadkii galay falalkaas dembiyada ah.
- Waxayna noqdeen arrimo ay guud ahaanba adag tahay in la xalliyo. Lama hayo wax markhaantiyo ah, mana jirto cid wax aragtay. Dadku aad ayuu u tiro badnaa oo badankood madaxa iyo wejiga ayey maryo ugu duubnaayeen. Mugdina waa ay ahayd. Boliiska badankood waxay ku mashquulsanaayeen in ay isdifaacaan meeshii ay u kuurgeli lahaayeen wixii dhacayey, ayuu yiri Daniel Ångman.
Rabshadahaan fiidnimadii 19kii Mey ka qarxay xaafadda Husby waxay ku bilowdeen in baabuurta la gubo oo ciidamada ammaanka la dhagxiyo. Kadib waxay rabshadahaas oo socdey toban cisho ku sii fideen xaafado kale oo ku yaal duleedka magaalada Stockholm.
Boliiska degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Stockholm waxaa loo soo gudbiyey 400 oo dacwo oo la xiriira rabshadahaas. Dacwadahaas badankoodna hadda hoos ayaa loo dhigay kadib loo arkay in aan wax xal ah laga gaareyn.
Dhanka kale hal qof ayaa xabsi loogu xukumay in uu gubay gawaari dibedda taalley, halka laba qofna ganaax dusha laga saaray. Labadaas qofna waxaa lagu soo eedeeyey in midkood uu maandooriye la marqaansanaa, kan kalena in uu sitey gaaska dadka ka ilmeysiiya. Waxaa intaas dheer in hadda maxkmadi ku socoto qof lagu tuhunsan yahay in uu jebiyey xeerka midiyaha.
Welise waxaa jira dacwooyin lagu gudjiro. Daniel Ångman wuxuu muujiyey in uu ku qanacsan yahay habka dacwooyinkaasi u socdaan, isagoo ka rajeynaya xeerilaaliyaha in uu dhaqso dacwad ugu oogo kooxdaan hadda ariimahooda baaritaanka lagu hayo.
Dacwooyinkaas badankood waxay ku saabsan yihiin rabshado khasaare keenay.
- Waxaan soo bandhigi doonaa toban dacwo oo ka mid ah 16 qof oo la tuhunsan yahay. Waxaa laga yaabaa in loo arko wax yar, laakiin annagu guul ayaan u aragnaa, ayuu hadalkiisa ku daray Daniel Ångman.
Rabshadahaas waxaa lagu gubay baabuur farabadan. Waqtiyada rabshaduhu socdeenna waxay ahayd xilli habeen ah oo mugdi ah, dadka rabshadaha sameynayeyna madaxaa u wada duubnaa. Sidaas awgeed, waa ay adkayd in wejiyadooda laga dhex arko filimadii laga duubay.
Dhanka kale Mariella Roman oo saxaafaddu la kulantay iyadoo eeygeeda dibedda la joogta ayaa boliiska ku dhaleeceysey in ay hoos u dhigaan dacwooyin sidaas u badan. Waxayna tiri:
- Wax fiican uma arko. Waxay ahayd in si qotodheer loo baaro wixii xaafaddaan ka dhacay. In hoos loo dhigo boqolkiiba 90 dacwooyinkii la gudbiyey waxay u muuqataa wax laga argagaxo. Anigu waxaan qabaa in dadkii rabshadahaan geystey la marsiiyo ciqaabka ay mudan yihiin.
XAQIIQADA: Dacwooyinkii laga soo gudbiyey gobolka Stockholm
Xaafadaha Dhammaan tirada dacwooyinka Tirada hoos loo dhigay
Xaafadaha waqooyi: 40 dacwo 24 dacwo
Xaafadaha galbeed: 105 dacwo 94 dacwo
Xaafadaha koonfureed: 136 dacwo 131 dacwo
Xaafadaha Södertörn: 103 dacwo 96 dacwo
Degmada Södertälje: 17 dacwo 16 dacwo
Degmada Nacka: 9 dacwo 5 dacwo
Wadar: 410 dacwo 367 dacwo (90%)
Isha: Ekot oo isku soo ururisay tiradii ay ka heleen boliiska